Fivavahana any Angletera | Fitsangatsanganana tanteraka
Hatramin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo, ny fivavahana be mpampiasa indrindra tany Angletera izay nahazo ny toerana ofisialy teto amin'ny firenena dia ny Anglicanism, sampan'ny Kristianisma.. Na izany aza, ny fivoaran'ny tranga ara-tantara sy ny fisehoan-javatra toy ny fifindra-monina dia nahatonga ny finoana samihafa hiara-hiaina ao anatin'ny sisintaniny. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia dinihintsika hoe iza no fivavahana fampiasa indrindra any Angletera sy ny sasany amin'ny fahalianany.
1.1 Fotopampianarana anglikana
2 Fivavahana Katolika
4.1 Fotopampianarana hindoa
5.1 Fotopampianarana bodista
6.1 Fotopampianarana jiosy
Ny fivavahana ofisialin'i Angletera dia ny Anglicanism, izay ampiharin'ny 21% amin'ny mponina. Ny fiangonan'i Angletera dia nijanona niaraka tamin'ny fiangonana katolika hatramin'ny taonjato faha-XNUMX. Izany dia nipoitra tamin'ny didim-panjakana nataon'ny Mpanjaka Henry VIII taorian'ny fihetsika ambony indrindra tamin'ny 1534 izay nanambarany fa lohany avo indrindra amin'ny fiangonana ao anatin'ny fanjakany izy ary nandidiany ny olom-peheziny hisaraka amin'ny fankatoavana ara-pivavahana ny Papa Clemente VII, izay nanohitra ny zava-misy nisaraka tamin'ny Mpanjakavavy Catherine avy any Aragon ny mpanjaka hanambady an'i Ana Bolena malalany.
Ny lalàna momba ny Treasons tamin'io taona io dia nametraka fa ireo izay nandà izany fihetsika izany ary nanala ny mpanjaka tamin'ny fahamendrehany ho lohan'ny Eglizy Angletera na nilaza fa heretika na schismatic dia hiampangana azy amin'ny famadihana be dia be miaraka amin'ny fanamelohana ho faty. . Tamin'ny 1554 Mpanjakavavy Mary I avy any Angletera, izay Katolika nafana fo, dia nanafoana izany asa izany fa ny rahavaviny Elizabeth I dia namerina azy io tamin'ny fahafatesany.
Tamin'izany no nanombohan'ny vanim-potoana tsy fandeferana ara-pivavahana amin'ny katolika tamin'ny alàlan'ny fanambarana ny fianianana amin'ny Act of Supremacy ho an'izay rehetra mitazona toerana ampahibemaso na ara-pivavahana ao amin'ny fanjakana. Tao anatin'ny roapolo taona farany nanjakan'ny Elizabeth I, rehefa nesorina tamin'ny heriny sy ny fananany ny katolika dia maro ny fahafatesan'ny katolika nodidian'ny mpanjakavavy izay nahatonga azy ireo ho maritiora marobe ho an'ny fiangonana katolika toa ny zezika jesita Edmundo. Notendren'ny Papa Paul VI ho loholona tamin'ny taona 1970 izy ho iray amin'ireo martiry efapolo naterak'i Angletera sy Wales.
Mpanjaka Henry VIII dia Katolika manohitra ny Protestanta sy mpivavaka be. Raha ny marina dia nambara ho "Mpiaro ny finoana" izy noho ny fandavany ny Loterana. Na izany aza, mba hiantohana ny fanafoanana ny fanambadiany dia nanapa-kevitra ny hiala amin'ny fiangonana katolika izy ary ho lasa lohan'ny fiangonan'ny Angletera.
Tamin'ny ambaratonga teolojia dia tsy dia nitovy tamin'ny fivavahana katolika ny anglikanisma voalohany. Na izany aza, nitombo isa ireo mpitarika an'io fivavahana vaovao io naneho ny fiaraha-miory tamin'ireo Protestanta Fanavaozana, indrindra fa i Calvin ary vokatr'izany ny Fiangonan'i Angletera dia nivoatra tsikelikely nankany amin'ny fifangaroana teo amin'ny fomba Katolika sy ny Fanavaozana Protestanta. Amin'izany fomba izany, ny Anglikanisma dia raisina ho toy ny fivavahana mandefitra fotom-pianarana maro karazana sy miampy ireo singa ilaina amin'ny Kristianisma.
Raha latsaky ny 20% -n'ny mponina dia ny katolika no fivavahana faharoa ampiasain'ny anglisy. Tao anatin'ireo taona faramparany, ity fotopampianarana ity dia miaina ny fahaterahana indray any Angletera ary isan'andro dia misy bebe kokoa ao amin'ny firenena. Samy hafa ny antony, na dia misy lanjany lehibe kokoa aza ny roa: amin'ny lafiny iray, ny fihenan'ny fiangonan'i Angletera satria ny mpino sasany dia niova ho Katolika noho ny fitoviana amin'ny finoana na ny fanekena ny tsy finoana an'Andriamanitra. Etsy ankilany, mpifindra monina katolika maro no tonga any Angletera izay mampihatra ny zavatra inoan'izy ireo, ka mifoka rivotra madio ao amin'ny fiarahamonina katolika.
Nanampy tamin'ny famerenana amin'ny laoniny ny katolika any Angletera fa ny olo-tsotra amin'ny toerana misy ifandraisany dia nanambara ampahibemaso fa Katolika izy tao amin'ny firenena iray izay nonina tao amin'ny fandroahana olona ireo mpino ireo ary nisaraka tamin'ny toerana sivily sy miaramila. Ohatra iray amin'ireo olo-malaza katolika any Angletera ny minisitry ny Asa Iain Duncan Smith, talen'ny BBC Mark Thompson na ny praiminisitra teo aloha Tony Blair.
Ny fivavahana fahatelo ampiasain'ny mponina any Angletera dia ny Silamo, miaraka amin'ny 11% amin'ireo mponina ao aminy ary io no finoana nitombo indrindra tao anatin'ny folo taona lasa izay raha ny filazan'ny Office for National Statistics. Any London renivohitra no misy azy, ary misy Silamo marobe kokoa mifantoka arahin'ireo toerana hafa toa an'i Birmingham, Bradford, Manchester na Leicester.
Ity fivavahana ity dia teraka tamin'ny taona 622 talohan'i JK tamin'ny toritenin'ny Mpaminany Muhammad tany Meka (Arabia Saodita ankehitriny). Teo ambany fitarihany sy ny an'ny mpandimby azy dia niely haingana eraky ny planeta ny finoana silamo ary ankehitriny dia iray amin'ireo fivavahana manana mpino betsaka indrindra eto an-tany misy olona 1.900 miliara. Ankoatr'izay, ny Silamo no maro an'isa amin'ny firenena 50.
Ny finoana silamo dia fivavahana iray monotheistic mifototra amin'ny Koran, izay manana ny fiheverana ifotony ho an'ny mpino dia ny hoe "Tsy misy andriamanitra afa-tsy Allah ary Muhammad no mpaminaniny."
Ny fivavahana manaraka miaraka amin'ny mpino betsaka indrindra dia ny Hindoisma. Toy ny amin'ny Silamo, ireo mpifindra monina hindoa tonga niasa tany Angletera dia nitondra ny fomba amam-panao sy ny finoany. Maro amin'izy ireo no nifindra tany amin'ny Fanjakana Mitambatra taorian'ny fahaleovan-tenan'i India tamin'ny 1947 sy ny ady an-trano tany Sri Lanka izay nanomboka tamin'ny taona 80.
Ny vondrom-piarahamonina hindoa dia misy ampahany betsaka any Angletera, ka tamin'ny 1995 dia natsangana ny tempoly Hindoa voalohany, avaratry ny renivohitra anglisy any Neasden, mba hahafahan'ny mpino mivavaka. Tombanana fa eto amin'izao tontolo izao dia misy Hindoa 800 tapitrisa, iray amin'ireo fivavahana manana mpino indrindra eto an-tany.
Tsy toy ny fivavahana hafa, ny Hindoisma dia tsy manana mpanorina. Tsy filozofia na fivavahana homogène fa fitambarana finoana, fombafomba, fomba amam-panao, kolotsaina ary fitsipi-pitondran-tena mamorona fomba amam-panao iraisana, izay tsy misy fikambanana afovoany na dogma voafaritra.
Na dia manana andriamanitra sy demigods marobe aza ny pantheon Hindou, ny ankamaroan'ireo mahatoky dia mpivavaka amin'ny fisehoana intelon'ny andriamanitra fara tampony fantatra amin'ny anarana hoe Trimurti, ny Andriamanitra telo izay iray: Brahma, Visnu ary Siva, mpamorona, mpamonjy ary mpanimba. Ny andriamanitra tsirairay dia samy manana avatar, izay reincarnation an'ny andriamanitra eto ambonin'ny tany.
Fahita ihany koa ny mahita mpanaraka ny bodisma any Angletera, indrindra fa avy amin'ny firenena Aziatika izay manana tantara iraisana amin'i Angletera vokatry ny fanjakana anglisy natsangana tao amin'io kaontinanta io hatramin'ny taonjato faha-XNUMX. Etsy ankilany, nisy koa fiovana marobe tamin'ny finoana an'io finoana io avy amin'ny finoana hafa.
Ny Buddhism dia iray amin'ireo fivavahana lehibe eto amin'ny planeta araka ny isan'ny mpanaraka azy. Izy io dia manolotra karazana sekoly, fotopampianarana sy fomba fanao isan-karazany izay voasokajy ao amin'ny Buddhism avy any avaratra, atsimo ary atsinanana.
Ny Buddhism dia nipoitra tamin'ny taonjato faha-XNUMX talohan'i JK avy amin'ny fampianarana nomen'i Siddhartha Gautama, mpanorina azy, any avaratra atsinanan'i India. Nanomboka teo dia nanomboka fanitarana haingana tany Azia izy io.
Ny fampianaran'i Bouddha dia fintinina ao amin'ny "Fahamarinana Maha-efatra" izay fotom-pivavahan'i Karma. Ity lalàna ity dia manazava fa ny fihetsiky ny olombelona, ​​na tsara na ratsy, dia misy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika sy amin'ny nofo hafa manaraka. Toy izany koa, ny Buddhism dia mandà ny famaritana satria afaka mamolavola ny fiafarany mifototra amin'ny fihetsik'izy ireo ny olombelona, ​​na dia mety mandova ny vokadratsin'ny zavatra niainany tamin'ny fiainana taloha aza izy ireo.
Ny fivavahana jiosy koa dia misy any Angletera ary iray amin'ireo fivavahana tranainy indrindra eran'izao tontolo izao, izay karazan'olona tokana manana ny maha-izy azy, satria manamafy ny fisian'ilay Andriamanitra tokana manam-pahefana sy manam-pahefana. Ny Kristianisma dia nalaina avy tamin'ny Jodaisma satria ny Testamenta Taloha no tapany voalohany amin'ny Baiboly Kristiana ary i Jesosy, zanak'Andriamanitra ho an'ny Kristiana, dia avy amin'ny jiosy.
Ny atin'ny foto-pampianarany dia avy amin'ny Torah, izany hoe ny lalàn'Andriamanitra izay naseho tamin'ny alàlan'ny didy nomeny an'i Mosesy tao Sinay. Amin'ny alàlan'ireto didy ireto dia tsy maintsy mifehy ny fiainany ny olombelona ary manaiky ny sitrapon'Andriamanitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Fivavahana any Angletera
derly dia hoy izy:
aiza ny isan-jato
Mamaly an'i derly